प्रचण्ड–माधव समूहको तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु, आज सिठी जुलुस – नेपाली संगसार
प्रचण्ड–माधव समूहको तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु, आज सिठी जुलुस
नेपाली संगसार calendar_today १३ माघ २०७७, 11:40 am
काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले मंगलबार सिठी जुलुस निकालेको छ । सोमबार घोषणा गरिएको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत उक्त समूहले मंगलबार सिठी जुलुस निकालेको हो ।
लैनचौरबाट निस्किएको जुलुस असन, इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर पुगेर सकिएको छ । यो समूहले माघ २८ मा फेरि अर्को जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि माघ ९ मा पनि यो समूहको राजधानीमा जनप्रदर्शन भएको थियो ।
तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत राजधानी बाहिरका बुटवल, विराटनगर र धनगढीमा पनि प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ । राजधानी उपत्यकाभित्र सांसदहरुको धर्ना, माघ १६ को शहीद दिवसमा श्रद्धाञ्जली सभा पनि राखिएको छ ।
बिहीबार दिन के गर्न हुन्छ के हुँदैन ? आज भगवान…
मन्दिर जाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएकी महिला यी रहेछिन, भोकै…
आमा बनेपछि ‘सक्किगोनि’मा फर्किइन् रक्षा
धेरै खाँदा तौल बढ्ने चिन्ता लाग्छ ? उसोभए भए ढुक्कले…
अति विपन्न मुसहर बस्तीमा सहयोग लिएर पुगे कलाकार शाह
बिहीबार दिन के गर्न हुन्छ के हुँदैन ? आज भगवान विष्णुको पूजा गर्दा हुन्छ धन लाभ
नेपाली संगसार calendar_today १४ साउन २०७८, 3:26 am
आज विहीवार । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले आजको दिन गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा–आराधना गर्ने गर्दछन् ।
विहीवारको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ ।
यो दिन पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दा’न गरेमा शौभाग्य मिल्ने विश्वास रहि आएको छ । आजको दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ ।
यो व्रत शुक्ल पक्षको पहिलो बिहीबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । त्यस दिन अनुराधा न’क्षत्र परेमा असाध्यै राम्रो मानिन्छ ।
बिहान स्नानपछि पहेलो वस्त्र धारण गर्ने । त्यसपछि पहेलो फूल र चन्दनलाई एक साथ मिलाएर प्रसाद बनाउने र यस प्रसादलाई भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गर्नुपर्छ ।
यसबाट भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उहाँको आर्शिवाद तपाईंको घरमा सधैँ भइरहने छ । व्रतको दिन शुद्ध भएर पहेँलो कपडा लगाई ‘ऊँ गुरवे नमः’मन्त्र कम्तिमा पाँच माला जाप गर्नुपर्दछ ।
बिहीबारको व्रत सम्पादन गर्दा केराको रुखलाई पूजा गर्ने चलन छ । पूजा गर्दा पहेँलो चन्दन, चनाको दाल, छाता, मिठाईको रुपमा लड्डु आदिको दान गरेमा लाभ मिल्नेछ । भोजन गर्दा एक छाक नुन बार्नु पर्दछ ।
बिहीबार दिन के गर्न हुन्छ के हुँदैन?
धार्मिक मान्यता अनुसार हप्ताका सात दिनमा सातै किसिमको महत्व छ । अन्य बारजस्तै बिहीबारलाई पनि धार्मिक महत्वको दिनका रुपमा व्याख्या गरिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृ’ष्टीले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहीबार गरेका धार्मिक कार्यको फल त त्काल मिल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
बिहीबार के गर्ने जुनसुकै कामको दुई पाटो हुन्छ। त्यसैले धार्मिक महत्वका साथ गरिने पूजा आजामा पनि दुई महत्व हुन्छ । त्यसैले गर्न हुने र नहुने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
–बिहीबार सूर्य उदाउनु भन्दा अघि नै शुद्ध भएर भगवान विष्णुका नाममा गाईको शुद्ध घ्यू हालेर दियो बा’ल्नु राम्रो हुन्छ । – निधारमा केसरी वा बेसारको पहेंलो टिका लगाउँदा राम्रो मानिन्छ। – ब्रह्माणलाई कुनै पहेँलो वस्तु दान गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । – भगवान शिवका नाममा पहेँलो रंगको लड्डू चडाउँदा पुन्य प्राप्ती हुन्छ । –फलफूलमा केरा दान गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
के गर्न हुँदैन धर्मशास्त्र अनुसार, बिहीबार, कपाल नुहाउनु हुँदैन, रौं का’ट्नु हुँदैन, दारी का’ट्ने वा नङ का’ट्नु हुँदैन, त्यस्तै भारी कपडा धुनु पनि हुँदैन ।
धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार, बिहीबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अ’शुभ हुने मान्यता छ । रौं का’ट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने विश्वास गरिन्छ । यसो गर्दा शि रमा असर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार कपाल धुने, कपडा सफा गर्ने, दारी का’ट्ने, रौ का’ट्ने, फेशियल गर्ने, नङ का’ट्ने काम कहिले पनि नगर्नुस् । त्यस्तै घरको सरसफाइ माकुराको जालो ह’टाउने काम पनि बिहीबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
बिहीबारको दिन लक्ष्मी नारायणको दिन मानिन्छ । यस दिन पुजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन । पुजा गर्दा लक्ष्मी नारायणको पुजासँगै गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पति पत्निबीचको स’म्बन्ध पनि राम्रो हुने धर्म शास्त्रमा उल्लेख छ ।
मन्दिर जाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएकी महिला यी रहेछिन, भोकै मन्दिर गएकी निलमले मन्दिर सम्म पनि पुग्न पाइनन्
नेपाली संगसार calendar_today १३ साउन २०७८, 2:50 pm
साउनको महिना भगवान शिवको वर्त वस्ने पवित्र महिना हो । भगवान शिवको पुजा र ब्रतको लागि कतिपय भक्तहरु निकै कठोर नियम पालना गर्छन । बाँकेको नरैनापुर ५ मा सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर छ । त्यहाँ अहिले पर्यटकिय हिसावले पनि निकै चहल पहल हुने गरेको छ ।
बाँके जिल्लामा एक जना महिला पानी पनि नखाएर सोमवारको व्रत बसेकी थिइन् । उनी व्रत बसेर माथि डाँडामा रहेको शिव मन्दिरमा गएकी थिइन् । तर पछि ति महिलालाई यस्तो भयो की ४ जनाले स्ट्रेचर बनाएर बोकेर ल्याए । साउने महिनामा ब्रत बसेर पानी नखाएर भोकै शिव मन्दिरमा दर्शन गर्न पुगेकी ति महिलाको निधन भएको छ । शारिरीक रुपमा अलि मोटो देखिने ति महिला सबैको अगाडी छटपटाउन थालिन् । उनलाई बचाउन धेरैले कोशिष गरे ।
नरैनापुर ५ मा भएको यो घटनाले भोकै बसेर मन्दिर दर्शन गरेकै कारण निधन भएको हो की अथवा अन्य केही कारणले निधन भएको हो भन्ने खुलेको छैन । नरैनापुरमा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिरमा उनी दर्शन गर्न गएकी थिइन् । उनका परिवारले यस्तो ब्रत बसेको बेलामा जान पर्दैन भनेर सम्झाएका थिए । तर उनले परिवारका सदस्यले भनेको मानेनन् । उनी अन्य महिलालाई भेटाउन भनेर छिटो छिटो हिँडेकी थिइन् ।
नेपालगन्जकी महिला निलम नाम बताइएकी उनी बाटोमै वेहोस भइन्, उनलाई धेरैले सहयोग गर्ने कोशिष गरे तर बचाउन सकेनन् । एक जना प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्, मान्छेहरु कित असहिष्णु भने तपाई सक्नुहुन्छ के भन्दै हिँडाउँदै लगेका थिए । उनी हिड्न नसकेको देखिन्छ । तर उनलाई जबरजस्ती माथि लगिएको थियो । तर उनी मन्दिरमा पुग्न नपाई बिचैमा निधन भयो ।
नेपाली संगसार calendar_today ६ साउन २०७८, 1:26 pm
काठमाडौं। हाँस्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनि’मा ‘रक्षा’को भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी रक्षा श्रेष्ठ कार्यक्रममा फर्किएकी छन्। उनी बिहिबार प्रशारण हुने नयाँ भागबाट कार्यक्रममा देखिनेछिन्।
झण्डै १५ महिनापछि उनी ‘सक्किगोनि’ मा फर्कन लागेकी हुन्। उनको भूमिकालाई दर्शकले निकै मन पाएका थिए। तर, आमा बन्ने भएपछि उनले केही समयका लागि ब्रेक लिएकी थिइन्।
उनी आमा बनेपछि पुनः भद्रगोलमा फर्कने भएकी हुन्। २ महिना अघि मात्रै उनले छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्।
सुरुमा ‘भद्रगोल’ नामको टेलिसिरियल सुरु गरेको यो टोलीले विवादपछि नाम परिवर्तन गरेको थियो।
मिडिया हबसँगको विवादपछि अहिले ‘सक्किगोनि’ नाममा त्यही समूहले युट्युवमार्फत् टेलिसिरियल प्रशारण गर्दै आएको छ।
धेरै खाँदा तौल बढ्ने चिन्ता लाग्छ ? उसोभए भए ढुक्कले खानुस् यी १० खानेकुरा !
नेपाली संगसार calendar_today २८ असार २०७८, 1:26 pm
कसै-कसैलाई अलिकति बढि मासु, चिल्लो अनि गुलियो खानेकुरा खानेबित्तीकै तौल बढ्ने समस्याले सताइरहेको हुन्छ भने कसै-कसैलाई जति खाएपनि जस्ताको तस्तै हुने हुन्छ। यो सबै मानिसको शरीरअनुसार भर पर्ने कुरा हो। कसैको शरीरले खानेकुराको क्यालोरीलाई सजिलै पचाउन सक्छ र तौल बढ्ने डर हुँदैन, तर कसैको शरीरमा क्यालोरीलाई पचाउन सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, त्यसैले नै छिट्टै तौल बढ्ने समस्या हुन्छ।
एक साधारण पुरुषलाई दैनिक २६४० क्यालोरी र महिलालाई दैनिक १७८५ क्यालोरीको आवश्यकता पर्दछ। प्रति ८५ ग्राम मासुमा २१३ क्यालोरी हुन्छ, जसमा बोसो र चिल्लो पदार्थको मात्रा पनि उत्तिकै हुन्छ। अनि जसको शरीरले क्यालोरीलाई सजिलै पचाउन सक्दैन, उसले एक दिनमा मासु लगायत अन्य गुलियो खानेकुराको सेवन गर्दा मोटोपना बढ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ।
तथापी, क्यालोरीको मात्रा कम भएका अनि प्रोटिनको पनि पर्याप्त मात्रा भएका अन्य खानेकुराहरू पनि छन्, जसलाई जति खाँदा पनि मोटोपनाको डर मान्नुपर्दैन। यदि तपाईँलाई धेरै खान मन लाग्छ, तर मोटाउने डर लाग्छ भने कम क्यालोरी भएको खानेकुरा खानु उचित हुन्छ। त्यसैले निम्न १० खानेकुराहरू मन लागेजति ढुक्क भएर खानुहोस्
प्रति ५८८ ग्राम काउलीमा १४६ क्यालोरी, २९ ग्राम कार्बोहाइड्रेट अनि ११ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। साथै यो भिटामिन सी, बी-६ अनि फलामको पनि राम्रो स्रोत हो, जसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समेत मजबुत बनाइराख्दछ। सन्तुलित भोजनमा काउली मिसाउनाले क्यान्सरको खतराबाट पनि राहत पाउन सकिन्छ, साथै मोटोपनाको समस्याबाट पनि गुज्रिनु पर्दैन।
प्रति १०० ग्राम बन्दामा २४ क्यालोरी, ५.२ ग्राम कार्बोहाइड्रेट अनि १.२ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। यो भिटामिन सी र फोलेटको धनाढ्य स्रोत हो। यसले पनि काउलीले जस्तै क्यान्सरविरोधकको काम गर्छ र मोटोपनालाई नियन्त्रणमा राख्दछ।
फर्सी मन पर्छ भने फर्सी खानुहोस्। यसको प्रति ११६ ग्राममा ३० क्यालोरी, ८ ग्राम कार्बोहाइड्रेट र १.२ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। भिटामिन-ए को राम्रो स्रोत भएको फर्सीले आँखाको शक्तिलाई मजबुत बनाउँदछ भने यसमा रहेको भिटामिन-सी ले प्रतिरक्षा शक्तिको पनि विकास गर्दछ। यसमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ, त्यसैले मनले मागेको जति खाएपनि मोटाउने डर पैदा गराउँदैन।
काउलीको राजा ब्रोकाउलीको प्रति १४८ ग्राममा केवल ५० क्यालोरी, १० ग्राम कार्बोहाइड्रेट अनि ४.२ ग्राम प्रिटिन पाइन्छ। भिटामिन ए र सी को पनि राम्रो स्रोत भएको ब्रोकाउलीले हाडजोर्नीको दुखाईलाई कम गर्नुको साथै काटेको अथवा पोलेको घाउचोटलाई समेत चाँडै निको गराउन मद्दत गर्दछ। क्यान्सर गराउन फ्री राडिकललाई समेत नष्ट गर्ने ब्रोकाउली ढुक्कले खानुहोस्, मोटाउने चिन्ता नगर्नुहोस्।
कुरिलोको मौसम पनि आउँदैछ। त्यसैले दैनिक खानामा विविधता चाहनुहुन्छ भने कुरिलो मिसाउनुहोस्। यसको प्रति १६ ग्राममा केवल ३ क्यालोरी, ०.६ कार्बोहाइड्रेट अनि ०.४ प्रोटिन पाइन्छ। आँखाको लागि अति गुणवान कुरिलोले शरीरको प्रतिरक्षा क्षमतालाई समेत गिर्न दिँदैन। पाचन प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने यस खानेकुरा खाँदा मोटाउने डर मान्नै पर्दैन।
शरीरमा भएको बोसोलाई बिस्तारै कम गर्दै लान चाहनुहुन्छ भने मुलाको तरकारी अथवा काँचै मुला चपाउनुहोस्। यसको प्रति ४.५ ग्राममा केवल १ क्यालोरी, ०.२ ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। रगतलाई सफा गर्ने, स्वासप्रश्वासमा राहत दिने, मुटुलाई स्वस्थ राख्ने, मृगौला सफा गर्ने लगायत मुलाका थुप्रै फाइदाहरू छन्।
गाँजर खाँदा गुलियो हुन्छ तर यसले मोटोपना गराउँदैन। यसलाई त खानेकुराहरूमध्येको सबैभन्दा स्वस्थ अनि फाइदाजनक खानेकुरा भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसको प्रति ६१ ग्राममा २५ क्यालोरी, ६ ग्राम कार्बोहाइड्रेट अनि ०.६ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। भिटामिन-ए को राम्रो स्रोत गाँजरले आँखालाई तेजिलो गराई रतन्धो, मधुमेह, मुटुरोग, ग्यास्ट्रिक लगायत अन्य कैयौँ स्वास्थ्य समस्याहरूलाई समेत रोकथाम गर्दछ।
८. हरीयो सागपात
अधिकांश हरीयो सागपातको प्रति ३० ग्राममा औषत ७ क्यालोरी, १.१ ग्राम कार्बोहाइड्रेट र ०.९ ग्राम प्रोटिन रहेको हुन्छ। दमरोगीको लागि सञ्जीवनी मानिने हरीयो सागपातले क्यान्सरविरोधकको पनि काम गर्दछ। रक्तचापलाई नियन्त्रण गरी मुटुको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमीका खेल्दछ।
पिरो खाले होस् या नपिरो खाले होस्, खुर्सानी भनेको खुर्सानी नै हो। यसमा हुने क्याप्सेसिन भिटामिन-सी को राम्रो स्रोत हो। अझै क्याप्सेसिनले त शरीरमा क्यान्सरसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि प्रदान गर्दछ भनेर पत्ता लागिसकेको छ। खुर्सानी जति पीरो भयो क्यान्सरको लागि त्यति नै राम्रो मानिन्छ। तर विचार पुर्याउनुहोस्, खाली पेटमा पीरो खुर्सानीले नकारात्मक असर गर्न सक्छ।
शुद्ध शाकाहारीहरूको लागि प्रोटिनको राम्रो स्रोत चनाको प्रति १२.५ ग्राममा ४६ क्यालोरी, ८ ग्राम कार्बोहाइड्रेट अनि २.४ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। यसले धेरैबेरसम्म भोक लाग्न दिँदैन र मांशपेसीको वृद्धि र विकासमा समेत मद्दत गर्दछ। जिम जाने, दैनिक साइकल चलाउने अथवा भारी काम गर्नेहरूले चनाको दैनिक सेवन गर्नु एकदमै फाइदाजनक हुन्छ।